बलात्कार र हत्या नेपालमा उदाहरण विदेशको- मन्त्रीचाहिँ देशका कि विदेशका ? – Sulsule
बलात्कार र हत्या नेपालमा उदाहरण विदेशको- मन्त्रीचाहिँ देशका कि विदेशका ?
केदार सुवेदी २०७७ असोज १६ गते १४:५८ मा प्रकाशित
गएको हप्ता १२ वर्षे बालिकाको बलात्कार पछि विभत्स हत्याको घटनाले मुलुकलाइनै हल्लायो । यो घटना गाइगोठमा घास खोले गर्न जाँदाको थियो जो ग्रामिण भेगको एउटा नियति काम हो । यसको ठीक दुई वर्ष आघि अर्को यस्तै घटना भएको थियो । १३ वर्षकी बालिका अतिरिक्त पढाइका लागि साथीको घरमा गएकीमा भोलीपल्ट लासमात्रै भेटियो । यो शहरीक्षेत्रको नियमित काम हो ।
यो दुइवर्षको बीचमा यो प्रकृतिसंग मिल्दो जिल्दो बलात्कारका घटना दिनमा सातजनाको दरले कायम भएको भनी प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक भैरहँदा गृहमन्त्रीको जवाफ आयो ‘यो चिन्ता गर्नु पर्ने विषय नै होइन । अमेरिकामा त यो भन्दाबढी नै हुन्छ । अफ्रिकी मुलुकको दाजोमा हामी पुगिसकैकै छैनौं ।’
अघिल्लो पटकको त्यस्तो बलात्कार पछिको हत्याका बारे उनले ‘पूजीवादी व्यवस्थामा यस्तै हुन्छ’ भनी जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले उनीमाथि केही प्रष्टिकरण सोध्लान भन्ने ठानिएकोमा उल्टो उनको बचाउ गरेका थिए । यो पटक के हुन्छ भन्ने संकेत आएको छैन । तर नेपालमा यस्ता जघण्य घटना हुँदा गृहमन्त्री अमेरिकामा पनि यस्तो हुने गरेका भन्दै उम्कने गरेका छन ।
जाजरकोटमा भएको सातजनाकोविभत्स हत्याकाबारे पनि उनले उनले अमेरिकारकै उदाहरण दिएका थिए । त्यसबेला अमेरिकामा भरखर एकजनाको हत्याभएको थियो । यहाँ सातजनाको हत्या भएको ठाउँमा उहाँ एकजनाको हत्या भएको संग तुलना गरेको घटनापनि सर्वसाधारणले आपत्तिजनक मानेका थिए । यसो भन्ने गृहमन्त्री झनै सम्मानित हुँदै गए । यसले यस्ता घटालाई अहिलेको सरकारले वास्तवमानै गृहमन्त्रीले भने जस्तै ‘चिन्ताको विषय’ नमानेकै हो त भन्ने प्रश्न उठछ नै ।
गृहमन्त्रीले संसदको समितिमा वलात्कार बारे भनेका कुरा को यसरी रिपोर्ट भएको थियो – ‘गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बलात्कारका घटना बढे पनि विश्वका अरु देशको तुलना गर्दा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक नभएको बताएका छन् । विश्वका सवा दुइ सय देशको अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपाल बलात्कारका घटनामा धेरै पछाडि रहेको उनले बताए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री बादलले प्रत्येक दिन ६–७ जना बलात्कारको घटना हुने गरेको स्वीकार गरे । ’
गृहमन्त्रीको यस्तो जवाफ प्रति यता नागरिकले भने आक्रोस पोखे । यो भनाइका बारे प्रतिकृया दिँदै सञ्जालमा उनका भनाइ यसरी प्रकट भैरहेका छन – ‘जघन्य अपराधका घटनालाई आर्थिक आंकडाको तुलना गरेजस्तो हल्का रुपमा लिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । पीडित व्यक्ति, परिवारलाई जीवनभर पर्ने पीडा, कष्ट, समाज र समग्र मुलुकलाई पर्ने नकारात्मक असरको ख्याल गर्नोस् ।
जहिले पनि अरु देशको खराब पक्षसंग तुलना गरेर अवस्था चिन्ताजनक छैन भन्नु असक्षमता ढाकछोप गर्ने प्रबृत्ति हो । कमसेकम सामाजिक क्षेत्रमा आफ्mनो मुलुकलाई अब्बल, उदाहरणीय बनाउने काममा लाग्नुहोस्, यसको लागि अरबौंं रुपैयां चाहिंदैन, इम्प्याथी, इच्छाशक्ति र इमान्दारिता भए पुग्छ ।’
‘बलत्कारजस्तो जघन्य अपराध, कुनै देशसँग तुलना गर्न सुहाउछ र ? यसलाई मिनिमाइज होइन, निमिट्यान्न पार्नुपर्छ । भ्रष्टाचार तथा गरीबी, अशिक्षा जस्ता कुरामा मिनिमाइज भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ तर बलत्कारजस्तो अपराधमा यसरी तुलना गरिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ ।’
‘बलात्कार लाइ अरु देश संग तुलना गरेर बस्ने बाट के अपेक्षा गर्ने !!! आफ्नो पृष्ठ नै त्यस्तै भएर हो या के हो यतिका बलात्कारका घटना हुदा पनि सन्तोषजनक छ भन्छ । हे भगवान यो राष्ट्रको रष्ट्रसेवक मन्त्रि बोलेको हो कि एक नरपिचास रक्तपिपासु वा बलात्कारी ?????’
‘देशकै प्रतिनिधित्व गर्ने मानिसले बोल्दा समाजमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा हामीले सिकाउनु पर्छ र ! तपाईंको छोरीरनातीनी बलत्कृत भइन् भनेपनि तपाईंले यही भन्नु हुन्छ ? — “नआत्तिउ छोरी, यस्तो बलात्कार हाम्रो देशमा मात्रै होईन सबै देशमा हुन्छ !” … क्याबात कमरेड, कुनै समय तपाईंहरूले लगाउने गरेका महिला मुक्तिका नाराहरू कत्तिको सक्कलि थिए, अहिले देखिंदैछ । ’
‘मन्त्रीज्युले जाजरकोटका केही युवाहरुलाई रुकुममा ज्यान लिएको बेला अमेरिकामा भएको एक हत्यासँग तुलना गर्नुभयो । अहिले बलात्कारलाई पनि हल्का रुपमा ब्याख्या गर्नुभयो ।’
‘भनेपछि सक्की गो ने सत्तारुढ नेकपाले बलात्कारका घटनालाइ कसरी हेर्ने रहेछ र यिनी हरुले महिला मुक्ति के चाहि राहेछ । किन निर्मला को हत्यारा पत्ता लागेन भन्दा “१२ बर्ष पछि “ भन्छन प्रधानमन्त्रि नै । बारा ( बझाङ्ग र हरेक सहरमा हरेक दिन १० (२० वाटा बलत्कार का घटना हेर्दा यिनलाई सामन्य लाग्ने रहेछ ।’
‘सवा २०० देशको मन्त्री मै सबै भन्दा नालायक मन्त्रि पाउदा पनि हामी चिन्तित छैनौ । चुनाव छिटै आउदैछ ।’
‘कञ्चनपुरकी निर्माला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटना हाम्रा अगाडी ताजै रहँदा केही दिनअघि बझाङ्गकी १२ वर्षिया सम्झना विश्वकर्माको बलात्कारपछि ढुङ्गाले थिचेर विभत्स हत्या गरिनु र सामुहिक बलात्कारको सिकार भएकी सप्तरीकी १७ वर्षीया किशोरीलाई घटनाबारे प्रहरीमा उजुरी नगर्न भन्दै स्थानीय पञ्चहरूले धम्क्याएपछि झुन्डिएर आत्महत्या गरेको घटना सत्तासिन नालायक सरकारलाई सामान्य लाग्यो ।
सायद यीनका छोरी श्रीमती सुरक्षित भएकै कारण बलात्कार पीडित ती बालिका अनि किशोरीका घटना सामान्य लागेको हो । अझ प्रत्येक दिन ६र७ वटा बलात्कारका घटना हुने जो विश्वका अन्य देशको दाँजोमा पछाडीबाट १५ नम्बरमा परेको भन्दै नालायक सरकार आफ्नो छाती चाक्लो पार्दैछ । तिमीहरुलाई कोरोनाले नै लैजाओस् ।’
यी केही मात्रै हुन । नागरिकरको आक्रोस व्यापक नै छ । यतिबेला र्गहमन्त्री प्रति व्यक्त भएको यो आक्रोस अव प्रधानमन्त्री प्रति लक्षित हुने संकेत देखिदैछन ।
दुइवर्षअघि निर्मला पन्तको घटनामा गृहमन्त्री हुदै पछि सबै आक्रोस प्रधानमन्त्री माथि खनिएको थियो । त्यसका विम्वहरु अझै प्रकट भैरहेका छन । माथि उद्धरणमा परेका विवरणमा पनि त्यस्तो देखन सकिन्छ । गृहमन्त्रीको भनाइले बलात्कारलाई सहज र स्वाभाविक ठानेको देखाउछ र जसलार्य समाजले बहिष्कार गनूृ पनेृ हो तयसलार्य स्थापित गर्नखोजेको बुझाउछ ।
हत्या र वलात्कार जस्ता घटना अन्यत्र जे हुन तर आफनो देशमा शून्य भएको हेर्न चाहन्छन नागरिकहरु । अमेरिकरको उदाहरण दिनु भनेको शक्तिसम्पन्न देशका घटनालाई अघि सारेर अघिसारेर यो देशमा यो भन्दाबढी शानितसुरक्षाकायम हुनसक्तैन भन्न खोज्नु हो । त्यसकारण गृहमन्त्रीको यो भनाइ पछि प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोज्दै छ देशले ।
वलात्कारका सन्दर्भका गृहमन्त्रीलगायत सत्तारुढ दलका नेता समेत अर्कै प्रकारले प्रकट भैरहेका छन । संसदीय समितिमा नेकपाका शीर्ष नेतामध्येका एक तथा गृहमन्त्री थापाले जस्तो तुलना गरे, नेपालमा भएका बलात्कारका घटना अरू धेरै देशका तुलनामा कम भएकाले ‘चिन्ता लिनु नपर्ने’ भनेर जसरी वकालत गरे त्यो मनोविज्ञान नै यस्ता घटनालाई सामान्य मान्नेखालकोछ । यस्ताव्यक्ति गृहमन्त्रीमा रहुन्जेल यस्ता घटना बढदै जाने छन । विगतको विवरण हेरेपनि पुग्छ ।
गृहमन्त्री थापाले यस्तो ‘चिन्ता लिनु नपर्ने’ भनेर प्रतिकृया दिएको केही दिन पहिले त्यही पार्टीका एक सांसदले बलात्कारका ९० प्रतिशत घटना राजीखुसीमा भएका हुन्छन भन्ने सिद्धान्ता वा तथ्यांक सार्वजनिक गरेका थिए । ती सांसद राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुन । यसले सत्तारुढदलले कस्तो मान्छेलाई उच्च रमयाृदित ठाउँमा राखेको छ भन्ने बुझाउछ । यही क्रममा नेकपाकै अर्का एक सांसदले संसदीय समितिमा बलात्कारीको ‘लिंग छेदन’ गर्नुपर्ने धारणा राखेको समाचार सार्वजनिक भयो ।
त्यसैदिन गृहमन्त्रीले वलात्कार पछि हत्या गरिएका घटनालाई जसरी सामन्य गराउन खोजे त्यसकाविरुद्ध त्यो समितिले सामान्य प्रतिकृया समेत व्यक्त गरेन । अहिलेको संसद भनेको नेकपाको करिव दुइतिहाको सख्या रहेकोसंसद हो । यो समितिमा पनि त्यसरी नै उसको दुइतिहाइको प्रतिनिधित्व छ । त्यस्तो बेला सत्तापक्षका सांसदबाट गृहमन्त्रीको यस्तो जवाफ आउँदा सििमतका कुनैपनि साँसदले कुनै प्रतिकृया नदिनु आफैमा एउटा आश्चर्यकै विषय मान्नु पर्छ ।
एउटा अपराधको घटनामा अपराधीलाई यो वा त्यो बहानामा उम्काउँदा अर्को दर्दनाक अपराध हुन्छ भन्ने उदाहरण बझाङकी बालिकाको बलात्कारपछि भएको हत्या हो । दुइवर्ष अघि कन्चनपुरमा भएको घटनामा बलात्कारीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्ने सरकार माथि आरोप छ । त्यसो गर्दा अर्को बलात्कारका लागि उक्साउनुजस्तै हुनेरहेछ भन्ने पछिल्लो घटना अमेरिकामा पनि प्रकट नभएको जस्तो देखियो । बलात्कारका यस्ता घटनामा चिन्ता लिनु नपर्ने भन्ने गृहमन्त्रीको भनाइमा मौन सहमति जनाउने सांसदहरू पनि पाखण्डी पात्रकारुपमा चित्रित हुदैछन । ध्यान जाओस ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायधीशमा चुडाल र सुवेदी नियुक्त
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि विपक्षीले गरे अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
भारतबाट फर्किए पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र
एमसिसी सम्झौताप्रति कांग्रेस सकारात्मक:सङ्ग्रौला
ओलीले बोलाए सोमबारलाई एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक